The Ab Presents Nepal » मोदीको शपथग्रहणमा ओलीको सहभागी :नाकाबन्दीको कुरा प्रधानमन्त्रीले उठाउलान त ?
मोदीको शपथग्रहणमा ओलीको सहभागी :नाकाबन्दीको कुरा प्रधानमन्त्रीले उठाउलान त ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारतीय प्रधानमन्त्रीमा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भारतीय जनता पार्टीका नेता नरेन्द्र मोदीको शपथग्रहण समारोहमा सहभागी हुन बिहीबार नयाँदिल्ली जाने भएका छन् ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले बिमस्टेकसहित १० देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखलाई शपथग्रहण समारोहमा सहभागी हुन निम्ता दिएको हो ।
भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यसहित १० देशका राजदूतलाई मन्त्रालयमा बोलाई त्यस्तो जानकारी दिइएको हो । मोदीले बिहीबार साँझ ७ बजे प्रधानमन्त्रीको शपथ लिदैछन । यसअघि पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदा मोदीले सार्कका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखलाई बोलाइएको थियो ।
यसपटक भने मोदीले बिमस्टेकसहितका १० राष्ट्रका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखलाई निम्ता दिएका छन् । शपथ समारोहमा सहभागी भएपछि प्रधानमन्त्री ओली भारतीय राष्ट्रपतिद्वारा आयोजित रात्रिभोजमा सहभागी हुने कार्यक्रम छ ।
प्रधानमन्त्री ओली र प्रधानमन्त्री मोदीबीच शुक्रबार द्विपक्षीय वार्ता हुनेछ । प्रधानमन्त्री ओली शुक्रबार नै स्वदेश फर्कने परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सबै नेपालीको आशा बिश्वास नाकाबन्दीको प्रधानमन्त्रीले उक्त कार्यक्रममा उठाउलान त? प्रतीक्षारत छ्न ।